उपत्यकाको ढलमा देखिएको कोरोना भाइरसले कस्तो असर पर्ला? :: Setopati
सो अध्ययनलाई नेतृत्व गरेका डा. दिवेश कर्मचार्य भन्छन्, 'हामीले उपत्यकाका चार ठाउँको ढलबाट नमूना लिएर परीक्षण गर्दा दुई ठाउँमा भाइरस देखियोएको हो।'
'अहिले कोरोना कुन-कुन ठाउँमा छ भन्ने थाहा छैन। त्यसैले यसरी ढलहरूमा कोरोना फेला परे सो टोलहरूमा स्क्रिनिङ गर्न मिल्छ,' उनले भने।
निजी प्रयोगशालाले गरेको अध्ययन् भएकाले सरकारले यसलाई कसरी लिएको छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का निर्देशक डा. सुशिल ज्ञवालीले निजी प्रयोगशालाले गरेको सो अध्ययनमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने जनाए।
उनले यसमा थप अनुसन्धान गर्न भने परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने बताए। 'उहाँहरूले अहिलेलाई अध्ययन् नै हो भनिरहनुभएको छ। यसमा थप अनुसन्धान गर्ने हो भने स्वीकृति लिनुपर्छ,' उनले भने।
इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डेले याे परीक्षणाकाे बारेमा धेरै जानकारी नपाएको जनाए। 'मैले पनि सुनेको हो। हामीले उहाँहरूलाई कसरी परीक्षण गर्नुभएको हो भनेर सोध्न बोलाउँछौं। त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने थाहा हुन्छ,' उनले भने।
प्रत्येक ढलबाट ५० एमएल नमूना संकलन गरिएको थियो। त्यसपछि नमूनालाई सुरुमा आरएनए छुट्याइएको र पछि 'पिसिआर कम्पोनेन्ट' र 'डिएनए सिक्वेन्सिङ' गरेर परीक्षण गरिएको डा. कर्मचार्यले बताए।
'अमेरिकाकै बस्टनमा एक ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट नमूना लिएर परीक्षण गर्दा भाइरस देखिएको थियो। त्यसैले नेपालमा पनि हामीले ढलको नमूनामा परीक्षण गर्यौं,' उनले भने। यो अध्ययनको लागि जम्मा ३० जना प्राविधिक खटिएको कर्मचार्यले जानकारी दिए।
'हामीलाई ललितपुर महानगरपालिकाले पनि ढलहरूको नमूना लिएर परीक्षण गर्न आग्रह गरेकाे छ, त्यो काम पनि हामी छिट्टै सुरु गर्छौं,' डा. कर्मचार्यले भने।
प्रकाशित मिति: आईतबार, असार २१, २०७७, ०६:४५:००